लोकदोहोरीमा जमेको एक जोडी, लाइभमा खुत्रुक्क पार्छन् भुवन, मोइबाइलमा पेल्छिन् रीता
रातैभरि दोहोरी गाएका छौँ, एल्बम आउँदैछ
प्रेरणा तिमल्सिना मंसिर १३, २०७५ | बिहिबार
भुवन चौलागाई र रीता हुमागाईले नेपाली लोक गीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । तर, छोटो समयमै उनीहरुले धेरथोर दर्शकको मन जित्न सफल छन्, केही फ्यान पनि कमाएका छन् ।
लोक सांगीतिक क्षेत्रमा सहयात्रा शुरु भएको २ वर्ष भएतापनि उनीहरुले एकअर्कालाई सानैदेखि चिनेका हुन् । एउटै गाउँमा जन्मे, हुर्केकाले उनीहरु सँगै घाँसदाउरा गर्ने, बालसुलभ खेल खेल्ने, एउटै स्कुल जाने गर्थे । बाल्यकाल सँगै बिताएकाले होला उनीहरुको प्रस्तुतिमा कताकता त्यो ‘केमेस्ट्री’ झल्किहाल्छ ।
एक अर्काको राम्रो बानीसँगै थुप्रै नराम्रा बानी र बाल्यकालमा गरेका अनगिन्ती बदमासीलाई विषय बनाएर उनीहरु दोहोरीमा घम्साघम्सी गरिरहन्छन् । यस्तै एउटा दोहोरी यी दुईले लोकपथको स्टुडियोमा पनि खेल्न भ्याए ।
भुवन र रीतासँग उनीहरुको सांगीतिक यात्रा, बाल्यकालका केही रमाइला किस्साहरु साथै भावी योजनाका बारेमा लोकपथ संवाददाता प्रेरणा तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
कति वर्ष भयो सांगीतिक यात्रा सँगै शुरु गर्नुभएको ?
हामीले सांगीतिक यात्रा शुरु गरेको दुई वर्ष भयो । तर, एकअर्कालाई पहिल्यैदेखि चिनेका हौं । एकै ठाँउमा जन्मियौं, हुर्कियौं । सँगै खेल्यौँ अनि अहिले पनि सँगै छौं ।
सानैदेखि गीत सङ्गीतमा रुचि थियो । हामी दुवैलाई लोक दोहोरी एकदमै मनपर्ने । गाँउ घरमा कार्यक्रम हुँदा हामी सँगै गाँउने गथ्र्यौं ।
यो दुई वर्षको सांगीतिक यात्रामा कतिको मनमुटावहरु भए ?
झगडा पर्ने भनेको लाइभ दोहोरी गाउँदा मात्र हो । श्रोता दर्शकहरुको चाहाना अनुसार दोहोरी प्रस्तुत गर्छांै । त्यसमा ख्याल ठट्टा, भनाभन हुन्छ तर, वास्तविक जीवनमा सानो देखि अहिले सम्म झगडा हुने मनमुटाव हुने चाहिँ भएन अहिले सम्म र हुँदैन पनि ।
कला क्षेत्रप्रतिको रुचि कसरी बढ्यो ?
रीता : सानै देखि नै गाउने चाहना थियो । गाउँको कार्यक्रकहरुमा गाइन्थ्यो । तर समय नमिलेर इच्छा हुँदाहुँदै पनि अवसर पाइएन । अहिले आएर साथीहरु सबै छुटिए । मिल्ने साथी नै भुवन हो । सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा एउटा साथी चाहिन्छ । त्यसैले उहाँसँगै मिलेर एल्बम निकाल्ने योजना बनायौं र योजनाअनुसार एल्बम निकालेका छौं ।
भुवन : सांगीतिक यात्रमा रुचि आफै आँउदो रहेछ । पहिलो त चाहाना हुनैप-यो । मनदेखि नै चाहेको कुरा त पूरा भइहाल्दो रैछ नि । सावित पनि भएको छ । सानै देखि संगीतमा रुचि थियो ।
मेरो जीवन रीताको भन्दा अलि फरक छ ।
उहाँ त महिला भएको कारण घरकै कामहरुमा बाँधिनु भयो । हाम्रो जन्म त काभ्रेमै भएको हो । तर, म १७ वर्षको उमेर देखि नै विदेशमा थिएँ । विदेशमा रहँदा पनि म संगीतलाई एकदमै माया गर्थें । खास गरी काठ क्षेत्रका गीतहरु बढी सुन्ने गरेको थिएँ ।
हाम्रो सांगीतिक यात्राको शुरुवात त गाँउघरमा कार्यक्रम हुँदा गाँउदा देखि नै भइसकेको थियो । स्कुल पढ्दा नै हामीले हाम्रो सांगीतिक यात्रा तय गरिसकेका थियौं । तर मिडियामा आउने, एल्बम निकाल्ने, लाइभ दोहोरीहरु गाउने, ठूल्ठूला स्टेज शोहरु गर्ने गरेको दुई वर्ष मात्र भयो । सबैजनाले सर्पोट पनि गर्नुभयो । त्यतिबेलाको परिस्थिति र अहिलेको फरक छ । पारिवारिक समस्या भएका कारण हामीलाई हौसला र प्रेरणा दिनेहरुको पनि कमी थियो । तर अहिले समय बदलिएको छ । हामी जस्तो समस्या अहिलेकाहरुलाई छैन ।
बढी त भुवनले नै पेल्नु हुन्छ । उहाँ पहिला देखि नै धेरै दोहोरी गाउने भएर पनि हो । म चाहिँ परेको ठाँउमा मात्र गाउने हो । उहाँले त अतिनै पेल्ने । पहिला सानो हुँदा घाँस काट्न जाँदा त गीत गाएर कति पेल्नु हुन्थ्यो ।
दुई वर्षमा कतिवटा स्टेज शोहरु सँगै गर्नुभएको छ ?
स्टेज प्रोग्रामहरु त धेरै नै सँगै गरेका छौं । साना तिना गरेर लगभग १०÷१२ वटामा हामीले सँगै गाइसक्यौं ।
आफ्ना सबै प्रस्तुतिहरु मध्ये तपाईहरुलाई सबैभन्दा मनपरेको चाहिँ कुन हो ?
सबैभन्दा राम्रो प्रस्तुति टिकाभैरवमा भएको थियो । एकदमै राम्रो र रमाइलो । त्यस कार्यक्रममा हामीले रातैभरि गाएका थियौं । ललितपुर बासीहरुले एकदमै मन पराउनु हुन्छ हामीलाई । हुन त सबैले मन पराउनु हुन्छ । जो काठ क्षेत्रका गीत सुन्नुहुन्छ उहाँहरुले मन पराउनु हुन्छ ।
रातैभरि गाएको गीत अझै सम्झिनु भएको छ ?
हजुर । सम्झना छ ।
दोहोरी ‘अन दि स्पट’ गाउनुहुन्छ कि अगाडि नै तयारी गरिएको हुन्छ ?
परिस्थिति त्यहीँ नै सिर्जना हुन्छ । एउटा कलाकारको क्षमता भनेकै यही हो । जो कोहीले म लाइभ दोहोरी गाँउछु भनेर गाउन सक्दैन । एल्बम र लाइभ दोहोरीमा गाउने गीतहरु फरक हुन्छन् । लाइभ दोहोरी गाँउदा विषय वस्तुहरु समसामयिक हुन्छन् । दोहोरीमा परिवेशले जे माग्छ त्यही भन्ने हो तर, रेकर्डिङमा लेखेर, हेरेर गाउने हो ।
दुई जनामा सबैभन्दा धेरै शब्दले पेल्ने को हो ?
रीताः बढी त भुवनले नै पेल्नु हुन्छ । उहाँ पहिला देखि नै धेरै दोहोरी गाउने भएर पनि हो । म चाहिँ परेको ठाँउमा मात्र गाउने हो । उहाँले त अतिनै पेल्ने । पहिला सानो हुँदा घाँस काट्न जाँदा त गीत गाएर कति पेल्नु हुन्थ्यो ।
भुवन जीलाई पेल्न सक्नु भएको कुनै प्रस्तुति याद छ ?
पछिल्लो समय काठे भाकाका गीतहरु चोरेर त्यसको मौलिकतालाई मासियो । भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । यसमा के भन्नु हुन्छ ?
गीत संगीतको सर्जकलाई सम्मान गर्नुपर्छ । जो कोहीलाई पनि सिर्जना गर्न आउँदैन । त्यसैले कसैले सिर्जनालाई चोरेर आफ्नो नाम जबरजस्ती राखिदिँदा उनीहरुको सिर्जना नै मरे बराबर हुन्छ ।
पहिला सर्जकहरुले गाएका गीतहरु बजारमा आएका छन् । लय चोरिएको छ । शब्दहरु पनि चोरिएका छन् । यसरी अरुको नामबाट आफूले नाम कमाउनु गलत हो । जसले यसो गर्छ उनीहरुमा चाहिँ क्षमताको कमी नै भएर हो भन्छु म ।
हामी चाहिँ सम्पूर्ण कलाकारिता र कलाकारहरुको सम्मान गर्छौं । सबैलाई मेरो नमन पनि छ । म पनि गीत सिर्जना गर्छु, लय बनाउँछु, शब्द भर्छु, मोडलिङ गर्छु, गाँउछु । मैले सिर्जना गरेको संगीत अरुले चोरेर गाँउदा मेरो पनि मन दुख्छ । म ओझेलमा पर्छु । सकिन्छ आफैले सिर्जना गर्ने । सकिदैन, अर्काको नचोर्ने ।
भुवन : मलाई काठ क्षेत्रको पार्वती कार्की मनपर्छ, स्वर मीठो छ उहाँको ।
रीता : सबै मनपर्छ तर एकजना मात्रै भन्नुपर्दा मलाई गीता दिदी मनपर्छ । काठ क्षेत्रको पार्वती दिदी पनि मनपर्छ ।
रीता : गायक चाहिँ त्यस्तो एकजना मात्र भन्नलाई कोही छैन । सबै उत्तिकै मनपर्छ ।
भुवन : सबै कलाकारहरुलाई सम्मान गर्छु तर, गायकमा मलाई मनपर्ने एकजना चकलेटी गायक हुनुहुन्छ । लाइभ दोहोरी साथै एल्बममा पनि मिठास दिनुहुन्छ । प्रदिप रोक्का जी ।
धेरै फ्यान हुनुहुन्छ होला तर, कोही क्रेजी फ्यान याद छ ?
भुवनः क्रेजी फ्यान त धेरै छन् । सबै भन्दा धेरै क्रेजी फ्यान याद गर्नुपर्दा ठ्याक्कै याद भएको चाहिँ एकादशीको बेलामा नुवाकोटमा एउटा सांगीतिक कार्यक्रममा भेटेको थिएँ सुजन कार्की भन्ने व्यक्तिलाई । उहाँले मेरो निकै तारिफ गर्नुभयो । अनि, ओहो मलाई यति माया गर्ने फ्यान हुनुहँुदो रहेछ भन्ने थाहा भयो ।
रीताः धेरैजना हुनुन्छ होला । तर, मलाई याद भएको चाहिँ नकुल शर्मा हो । मेरो हरेक गीतहरु शेयर गरिरहनुभएको हुन्छ । हरेक गीतमा आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिइराख्नुभाको हुन्छ ।
यति गुड लुकिङ हुनुहुन्छ भुवन जीको केटी फ्यानहरु चाहिँ कतिको छन् ?
केटी फ्यान त धेरै हुनुहुन्छ ।
फ्यानले प्रेम प्रस्ताव राख्नु भएको छ ?
मेरो पारीवारिक जीवन सबैलाई थाहा छ । म लुकाउँदिन पनि । म विवाहित मान्छे हो । त्यस्ता फ्यानहरु पनि आए जीवनमा । मैले सम्झाएँ पनि यो गलत छ भनेर । अहिले पनि आउँछन् बेलाबेला ।
केटीहरुको प्रेम प्रस्ताव आउँदा श्रीमती रिसाउनु हुँदैन?
थाहा दिनु हुँदैन नि त (हाँसो) ।
थाहा नदिनलाई केके गर्नुहुन्छ ?
आफ्नो मोबाइल र पर्स कसैलाई नदिने ।
रीताः मेरो पनि मोबाइल र पर्स मेरो अनुमतिबिना श्रीमान र छोराछोरीले छुनुहुन्न । म पनि मेरो श्रीमानको चलाउँदिन ।
अन्तिममा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
भुवनः हामीले संगीत यात्रा शुरु गरेको दुई वर्ष भयो । ६÷७ वटा एल्बम बजारमा आइसक्यो । आफै शब्द लेख्छु । लय भर्छु । मेरा जति पनि गीत बजारमा आएका छन् दर्शक श्रोताहरुले मनपराइ दिनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यतिकै माया र साथको अपेक्षा गरेको छु ।
हामीले अहिलेको पुस्ताको रुचिलाई मध्यनजर गर्दै एउटा गीत बनाएका छौं । त्यसलाई पनि उसैगरी माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ । मेरो कमीकमजोरीलाई सुधार्ने प्रयास पनि गर्नेछु । कलाकारलाई माया गर्नुहोस् । गीत संगीतको सम्मान गर्नुहोस् । धन्यवाद ।
रीताः दर्शकहरु प्रति आभारी छु । हाम्रो नयाँ गीत छिट्टै बजारमा आउँदै छ । आशा छ दर्शकहरुले मनपराइ दिनुहुन्छ ।
२१ तस्वीरमा हेर्नुहोस् बिजोरले बिजोग
भारतकी गायिकाको नेपाली गीत
भारतकी चर्चित गायिका साधना सरगम र गायक राज खम्बुको स्वर रहेको ‘चारै दिशा बाँडिने अन्तिम मोडमा’मा बोलक...
माघ २, २०७४ | मंगलबार
उजेली र उनका ‘बाहुन’ पहिलोपटक मिडियामा, सिरियल खेल्दाको अनुभव लजाउँदै सुनाए (भिडियोसहित )
काठमाडौं । कुनै जमाना यस्तो थियो जब टिभीमा यो हेर्छु, त्यो हेर्छु भन्नलाई कुनै विकल्प थिएन । नेपाल टेलि...
करोडपति क्षेत्रबहादुर यसरी बने घरबारविहीन, जिन्दगीले सिकाएको पाठ सम्झदै भने, ‘कमाएर होइन रमाएर बाँचेको छु’
हरेक दिन वीर अस्पताल, रत्नपार्क एरियामा क्षेत्रबहादुर भण्डारी आफ्नै धुनमा गीत गुनगुनाउँदै ह्वील चेयरमा पत्...
४८ घन्टामा अनमोललाई १० लाख दर्शक
काठमाडौं – अभिनेता अनमोल केसीको चर्चा दिन प्रतिदिन चुलिदो छ । उनले जुन चलचित्र अभिनय गरेपछि चर्चाको क...
पुस १८, २०७४ | मंगलबार
LIVE: एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा